२o७५ फागुन १८ शनिबार
मलाई सधैं तिरस्कार किन दिनुहुन्छ?
एकदिन हैन लगातार किन दिनुहुन्छ?
खुट्टा नहुनेहरुलाई बैसाखी दिने हो
मलाई जुत्ता उपहार किन दिनुहुन्छ?
त्यहाँ बा हराएको सूचना छापिएको छ
मेरि आमालाई अखबार किन दिनुहुन्छ?
आउनुस बरु यी आँखा लिएर जानुस
सधैं झरी,सधैं असार किन दिनुहुन्छ?
भोलि मान्छेचिन्न बिर्सन्छन् पैसाचिनेपछि
यी बच्चाको हातमा हजार किन दिनुहुन्छ?
अरु आउन या नआउन त्यहाँ तिमि आउनुपर्छ मारेर मात्रै हुँदैन मलाई तिमिलेनै जलाउनुपर्छ! बिदेश जानुअघि कहिले सोच्दैनन जानेहरुपनि कुनैदिन आफैंलाई रातो बाकसमा पठाउनुपर्छ मेरो बस्तीमा राजधानीको खबर पुग्नमात्रैपनि कि बौलाउनुपर्छ म सहरमा कि हराउनुपर्छ!!! यी नानीहरुलाई
काव्य-मुशायरामा सुनिए कवि अमृता स्मृति र गजलकार बरुण रिजाल
काठमाडौं । काव्य-मुशायराकाे १५ औँ श्रृंखलामा कवि अमृता स्मृति र ग़ज़लकार बरुण रिजालले आ-आफ्ना रचना वाचन गरेका छन् । कुन्ज नाटकघरमा आयोजित कार्यक्रममा पछिल्लो समय लोकप्रिय रहेकी कवि अमृता स्मृतिले
गाउँलाई शहरको जस्तो तडकभडक आएन । गाउँभरि बाटो आयो सरकार सडक आएन। बिरामी बालाई औषधी ले'र आउँछु भन्थ्यो, कहाँ पुग्यो कहाँ फर्केर अझै बालक आएन। जुन दिनदेखि मेरो गाउँमा मोटरबाटो खनियो, त्यहि दिनबाट मोटर आएन
मलाई सधैं तिरस्कार किन दिनुहुन्छ? एकदिन हैन लगातार किन दिनुहुन्छ? खुट्टा नहुनेहरुलाई बैसाखी दिने हो मलाई जुत्ता उपहार किन दिनुहुन्छ? त्यहाँ बा हराएको सूचना छापिएको छ मेरि आमालाई अखबार किन दिनुहुन्छ? आउनुस बरु यी आँखा लिएर